Mijanona eo akaikin'ny Archives lavitra »University of Hodges
tenifototra: Mijanona eo akaikin'ny lavitra
Fiainana Kampus, Hetsika ho an'ny fiaraha-monina
Miaraha amin'ny Drive Donation Pet and Person Person's Andao hanohana ny vondrom-piarahamonintsika sy hanampy ny hafa! Ny University Hodges dia niara-niasa tamin'ny Harry Chapin Food Bank sy Brooke's Legacy Animal Rescue, mba hanangona zavatra ho an'ny fianakaviana sahirana sy ireo namanay volo. Miaraha aminay amin'ny fanomezana amin'ny 1 Jona - 15 Jona 2020. Afaka Manamboatra A [...]	Hamaky bebe kokoa
Hodges Alumnus dia nahazo ny loka an'ny Lehiben'ny Naples Chamber
Miarahaba anao, Dave Weston! Hodges Alumnus dia nahazo ny mari-pankasitrahan'ny filohan'ny Naples Chamber Dave Weston, tompon'andraikitra voalohany ao amin'ny Naples Lumber & Supply, no nahazo ny loka an'ny Lehiben'ny Naples Chamber. Weston dia nomem-boninahitra noho ny fanoloran-tenany ho fanatsarana ny fiaraha-monina ary fanohanana mitohy ny efitrano. Hahafantatra azy ao amin'ny Chamber's [...]	Hamaky bebe kokoa
Ny fifandraisana misy eo amin'ny fampianarana ambony sy ny mpiasa
manam-pahaizana, Fiainana Kampus
Mpanoratra: Dr. John Meyer, Filoha, Hodges University Miaraka amin'ny fisarahana enina ambaratonga dia afaka mifandray tsy azo inoana ianao. Ny fifandraisana misy eo amin'ny fampianarana ambony sy ny mpiasa dia mivantana. Ao amin'ny Oniversiten'i Hodges, azonay ny fifandraisana misy eo amin'ny fanabeazana sy ny fahaizana matihanina ary namolavola ny mari-pahaizana sy mari-pahaizana manokana hamenoana ny filan'ny mpiasa [...]	Hamaky bebe kokoa
Fanendrena vaovao an'ny VP zoky ny raharaha akademika
manam-pahaizana, Fiainana Kampus, Faculty & Staff
Miarahaba anao Marie Collins! Hodges manendry ny VP zoky ny raharaha akademika Dr. Marie Collins no voatendry ho filoha lefitra ambony amin'ny raharaha akademika ao amin'ny Oniversiten'i Hodges. Amin'ity toerana ity dia hanampy amin'ny fanaraha-maso ny lafiny akademika amin'ny oniversite izy, ao anatin'izany ny fampandrosoana sy ny fampiharana ny fanatsarana ny fampianarana sy ny diplaoma efa misy, ankoatry ny fandefasana vaovao [...]	Hamaky bebe kokoa
Mirehareha izahay manolotra ireo mpitsabo mpanampy anay 2019!
Miarahaba an'ireo mpitsabo mpanampy anay 2019! Tamin'ny 10 Mey 2019, nirehareha tamin'ny oniversite Hodges nampiantrano ny Pinning Ceremony ho an'ireo mpitsabo mpanampy nahazo diplaoma tamin'ity taona ity. Fomba mahafinaritra iray hankalazana ny Herinandron'ny mpitsabo mpanampy! Ny lanonam-pinntsika dia fotoana manokana ho an'ireo mpitsabo mpanampy anay ary ny fotoana 2019 dia hetsika hafa miavaka. Niasa mafy ny mpitsabo mpanampy tsirairay hahatratra [...]	Hamaky bebe kokoa
Nampiroborobo ny serivisy ho an'ny mpianatra AVP i Lamb
Fiainana Kampus, Faculty & Staff
Arahabaina tamin'ny Fisondrotana, ry Noa! Noa Lamb dia nampiroborobo ny filoha lefitry ny serivisy ho an'ny mpianatra ao amin'ny Oniversite Hodges. Amin'ity toerana ity, i Noa dia mitantana ny asa rehetra ataon'ny Student Financial Services, ao anatin'izany ny fanampiana ara-bola, ny serivisy veterana, ny asa fanampiny ary ny trosa azo. Talohan'ny fampiroboroboana azy dia talen'ny serivisy ho an'ny Student Account and Auxiliary Operations [...]	Hamaky bebe kokoa
Zonta Honor and Event of Empowerment Fahombiazana
Zonta Club of Naples 'Honor and Empowerment hetsika natao tao amin'ny Hodges University dia fahombiazana lehibe! Nivory tao amin'ny Campus Naples ny mpitarika ny vondrom-piarahamonina sy ny mpandray anjara tamin'ny 18 aprily 2018, hianatra bebe kokoa momba ny fanomezana hery ny tenany sy ny fiarahamonin'izy ireo amin'ny hetsika Honor and Empowerment an'ny Zonta. Faly i Hodges 'nampiantrano ity hetsika ity niaraka tamin'ny [...]	Hamaky bebe kokoa
Ny Seza Mena
Fiainana Kampus, sekoly
Ekipa Mpanatanteraka ao amin'ny Oniversite Hodges mankalaza ny hetsika seza mena (LR) Teresa Araque, AVP Marketing / PIO; Dr. John Meyer, Filoha; Erica Vogt, VP Mpanatanteraka ny asa fitantanan-draharaha; Tracey Lanham, Associate Dean, Fisher School of Technology; ary Dr. Marie Collins, VP Senior an'ny raharaha akademika. Araka ny sitwithme.org, ny hetsika The Red Chair dia antsoina koa hoe Sit With [...]	Hamaky bebe kokoa
Joe Turner Lohan'ny Networking Alumni Vaovao
Tongasoa, Joe Turner! Faly izahay fa manana anao. Turner Nomena anarana hoe Senior Marketing and Alumni Outreach Content Creator ao amin'ny Hodges University 10 aprily 2019 –NAPLES / FORT MYERS, FLA - Joe Turner dia niverina tany amin'ny Hodges University ho Senior Marketing and Alumni Outreach Content Creator. Amin'ity toerana ity dia tompon'andraikitra amin'ny fanaraha-maso ireo fandraisana andraikitra momba ny fifandraisan'ny mpianatry ny oniversite izy, ankoatry ny famoronana […]
Miarahaba ny Mpianatra EMS
Hodges Mpianatra EMS dia naka ny toerana voalohany! Ireo mpianatra avy amin'ny programa Hodges University Emergency Medical dia nifaninana tamin'ny fahenina Panther EMS Challenge fahenina tao Lake Worth, FLA tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo. Natolotry ny Palm Beach State College izany hetsika izany. Ny ekipa avy amin'ny lafivalon'ny fanjakana dia notsaraina tamin'ny tranga isan-karazany. Ekipa 1 avy amin'ny [...]	Hamaky bebe kokoa